200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Xildhibaankii shalay Muqdisho lagu dilay oo aan weli la aasin iyo sababta loo diiday in la aaso | Shabakada Warbaahinta Times
Xildhibaankii shalay Muqdisho lagu dilay oo aan weli la aasin iyo sababta loo diiday in la aaso
Muqdisho-(Caasimadda Online): Wararka Muqdisho ka imaanaya waxey sheegayaan inaan weli la aasin xildhibaan Madoobe Cabdi Guuleed oo ay shalay Muqdisho ku dileen ilaalo la socotay Xildhibaan Maxamuud Abuukaate oo Baarlamanka Somalia ka tirsan.
Xildhibaanada iyo odayaasha marxuumka ayaa isku raacay inaan la aasin inta uu xildhibaan Abuukate ku doodayo in xildhibaanka la dilay uu bistoolad lasoo baxay kadibna sidaas lagu dilay, beesha marxuumka ayaa ku dooday in aaney aqbali karin in meydkooda eed lasii dabo dhigo, wada hadaladdo labadda reer dhex maray maanta ayaa lagu kala tagay iyadoo aan wax natiijo ah laga gaarin.
Sidoo kale xildhibaan Abuukate iyo mid ka mid ah xildhibaanada Dowladda dhexe u matala beesha marxuumka ayaa la sheegay iney isku fahmi waayeen qaabka arinta loo wajahaayo taas oo kiiska sii adkeysay.
Waxaa jirta madal kale oo beri loo balamay oo siyaasiyiin kale ay wadaan kuwaas oo raba iney ka taliyaan qaabkii meydka lagu aasi lahaa loona wada hadli lahaa.
Xildhibaan Madoobe wuxuu sidoo kale ahaa gaashaanle dhexe oo ka tirsan ciidanka booliska Somalia iyo sargaal sare oo ka tirsan hay’adda Nabad Sugida Qaranka.
Xildhibaan Abuukate wuxuu ka tirsan yahay xildhibaanada dhaliilsan Dowladda madaxweyne Farmaajo wuxuuna wajahaya culees badan madaama ay kiis dil ah fuliyeen istaafkiisa, waxaa kaloo jira warar sheegaya in ninka dilka fuliyay uusan aheyn askari u diiwaaan gashan Dowladda Somalia taas oo hadii ay cadaato dambi ku ah xildhibaan Abuukate madaama aan xildhibaanada loo ogoleyn iney ilaalo ka dhigtaan ciidan aan dowladda u diiwaan gashaneen.